काठमाडौं ७ मा उपनिर्वाचन गर्न राज्यको १० करोड
काठमाडौं– काठमाडौं ७ मा उपनिर्वाचन गर्दा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको खर्चमात्रै १० करोड बढी हुने देखिएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ–उम्मेदवारले गर्ने खर्च अझ छुट्टै छ । गत वर्षको मंसिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा करीब १० करोड खर्च भएको थियो । आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनमा थप १० प्रतिशत खर्च बढ्न सक्छ ।
पदावधि बढाउन अनौठो आदेश, यसरी जागिर खाइरहेका छन् यी निर्देशकले
सार्वजनिक होला त विश्वमै दुर्लभ मानिएको कोहिनुर हीरा !
यी हुन् पुरानो कार्यविधिअनुसार सलामीका ५ प्रकार
कसैले माया गरेन भन्दै ११ वर्षे बालकको सुसाइड नोटः बुबाआमा घरमा नभएको मौकामा आफैंलाई सिध्याए
के हाे मलेसियाको गाँठो ? चाबी मन्त्रीकाे हातमा
घरको सिसा फुट्दा सरकारबाट ३० लाख लिने मेयरबारे थप खुलासा